Rwanda waxay sharciyeysay Beerista, Iibinta iyo Isticmaalka Xashiishadda Caafimaadka • Dawooyinka Inc.eu
Ruwaanda waxay sharciyeysaa beero, iibinta iyo isticmaalka xashiishadda dawada
Dalka Bariga Afrika ku yaal ee Rwanda wuxuu si rasmi ah u sharciyeeyay beerista, farsamaynta iyo iibinta xashiishadda dawada ee dhoofinta iyo isticmaalka gudaha labadaba. Sharciga cusub ee sharciga ayaa dalka u horseeday hal talaabo inuu ku biiro warshadaha xashiishadda adduunka ee balaadhinta balaadhinaysa.
Dukumiintiga sharciyeynta xashiishadda caafimaadka waxaa u saxiixay Wasiirka Caafimaadka, Daniel Ngamije, iyo Wasiirka Caddaaladda, Johnston Busingye. Si kastaba ha noqotee, sharcigu wuxuu caddeeyay in isticmaalka, beerista iyo iibinta xashiishadda madadaalada ay sii wadi doonaan mamnuucista ciqaab adagna ay ku sii jiri doonaan.
Ruwanda, mamnuucida isticmaalka xashiishadda madadaalada ayaa weli ah
Wareegtada Wasiir nr. 003 / MoH / 2021 ee 25/06/2021 waxay sheegaysaa in "maalgaliye kasta ama qof kasta oo sameeya waxqabad beerashada, ka baaraandegidda, soo dejinta, dhoofinta iyo isticmaalka xashiishadda iyo alaabada xashiishka ee ujeeddooyin caafimaad" uu u qalmo.
Hooska cusub sharciga waxaa jiri doona wadar ahaan sideed qaybood oo rukhsad suurtagal ah, oo shaqeynaya shan sano. Mid kasta oo ka mid ah liisamadaas waa la hakin karaa haddii rukhsadda heysata aysan u hoggaansamin sharciyada. Ka gaabinta u hogaansanaanta qawaaniinta ku hoos qoran rukhsad kasta waxay keeni doontaa ganaax maamul oo u dhexeeya € 1000 (RWF 1 milyan) iyo in ka badan more 42.750 (RWF 50 milyan). Ganaaxan waa la labanlaabi karaa haddii lagu celiyo.
Intaa waxaa dheer, rukhsad-bixiyeyaasha waxaa looga baahan doonaa inay hirgeliyaan nabadgelyo heer sare ah oo loogu talagalay xarumaha xashiishadda ee dawada ah, oo ay ka mid tahay shaqaalaynta shirkad amni oo gaar loo leeyahay oo ruqsad haysta si ay u ilaaliso xarunta 24 saacadood maalintii.
Rwanda waxay noqon doontaa dalkii ugu dambeeyay ee qaaradda Afrika ee aasaasa suuq sharci ah oo loogu talagalay xashiishadda dawada, ka dib, iyo kuwo kale, Lesotho, Zimbabwe, Morocco iyo Uganda.
Ilaha ao AllAfrica (EN), Canex (EN), Warbixinta ChimpEN), Bariga Afrika (EN)
cannabisbeerista cannabisdaawo cannabisdaawada cawskaKoonfur Afrika
COVID-19 ma u horseedi doontaa sharciyeynta xashiishadda cannabis gudaha Boqortooyada Midowday?
Dhaqaalaha Ingiriiska waxaa aad u burburiyey COVID-19 oo laga yaabo inuu diyaar ahaado ilaa hadda ...
Xarunta Houston ee Sayniska Sayniska ayaa soo saaraysa imtixaan lagu kala saarayo xashiishka iyo hemp
Xarunta Sayniska Cilmiga ee Magaalada Houston waxay soo saartay hanaan tijaabo kiimiko ah oo lagu kala saari karo ...
149 beeraleyda ayaa raba in ay koraan cannabis gobolka si loogu tijaabiyo xashiishadda
Tijaabinta haramaha, 149 beeraley ayaa u saxiixay inay koraan xashiishadda gobolka. Wasaaradda ayaa ku warantay in ...